Ny Manifesto Media Vaovao
Asabotsy, Aprily 3, 2010 Alarobia, Aprily 29, 2015 Douglas Karr
Mahaliana fa ireo ao amin'ny indostrian'ny media sosialy dia mino fa vaovao rehetra izay mitranga manoloana ny media sosialy. Rehefa mijery ny marketing mivantana aho, ny marketing amin'ny database, ny tamba-jotra ary ny dokam-barotra - tsy mino aho fa tsy nitovy mihitsy ny tanjonay ho an'ny orinasa. Betsaka ny tantara tsy misy dikany sy manjombona momba ny fomba asa rehetra tsy maintsy mampifanaraka na tsy hahomby izy ireo. Tsy mino aho fa marina izany.
Na dia ekeko aza fa niova (sy nihatsara) ireo mpampita vaovao, dia mbola manandrana manatratra izay ananany hatrany ny orinasa. Ny tanjon'ny orinasa dia tsy nisy hafa mihitsy, ny mpanelanelana sy ny andrasan'ny mpanjifa no niova.
Raha manoratra manifesto ho an'ny orinasa aho dia mety hanana ireto tanjona folo ireto:
Ny orinasako dia misy aiza mitady antsika ny vinavina sy ny mpanjifa.
Ny orinasako dia misy rehefa mila antsika ny vinavina sy ny mpanjifa.
Ny orinasako dia mamaly rehefa manontany ny mpanjifa sy ny mpanjifa.
Hiorina ny orinasako fanantenana andrasana ho an'ny prospect sy ny mpanjifa.
Ny orinasako dia manatitra inona andrasan'ny mpanjifa.
Ny orinasako dia manatitra rehefa Nilaza izahay fa hanao izany.
Ny orinasako dia niaiky rehefa nanao hadisoana izahay.
Ny orinasako dia manamboatra ny lesoka nataontsika.
Ny orinasako dia marina miaraka aminao.
Ny orinasako dia mifampiresaka tsara mandroso eny an-dalana.
Ho valin'ny fisokafana, ny marina, ny fandraisana andraikitra ary ny misy, manantena ny orinasa fa hiverina sy hankafizin'ny mpanjifa sy ny mpanjifa ny tombam-bidin'izy ireo. Tsy varotra tsara fotsiny izany na vaovao marketing, orinasa tsara ity. Ireo foana no tanjon'ny orinasa niara-niasa tamiko.
Rehefa mandinika ireo tanjona ireo ianao dia tsy misy voalaza momba ny haino aman-jery vaovao, ny marketing amin'ny fanandramana, ny media sosialy, ny fikarohana, ny fanatsarana ny motera fikarohana, ny twitter, ny Facebook, ny mailaka na ny haino aman-jery marketing hafa. Ireo fisian'ireo mpampita vaovao ireo dia manamora ny fanatanterahana ny tanjon'ny orinasa - saingy tsy mitaky izany ny fandraisan'ny orinasa rehetra azy ireo.
Mety ho hitan'ny orinasanao fa ny fiantsoana mangatsiaka efa tonta tsara dia mahomby. Aza adino - mbola marina fa ny ankamaroan'ny tontolon'ny asa dia tsy nandray ny media sosialy, ary maro no mahomby, mitombo ary mandroso mihitsy aza. mandray Apple ohatra… tsy hitako ny fisokafan'ny Apple, mangarahara na fidirana an-tsokosoko amin'ny haino aman-jery sosialy - saingy mizotra tsara izy ireo, sa tsy izany?
Ny tiako holazaina dia ny tsy hanakiviana ireo orinasa tsy handray sy hampiasa media sosialy. Ny mifanohitra amin'izay no izy. Raha te hanana ny tanjon'ny fisehoan-javatra etsy ambony ny orinasanao dia tsy manana ahiahy aho fa ny haino aman-jery sosialy dia hanafaingana ny orinasanao raha omena loharano sy paikady mety. Raha tsy tanjon'ny orinasanao ireo tanjona ireo dia mety tsy ho mendrika ny haino aman-jery sosialy.
Mieritrereta alohan'ny hitsambikanao! Mangatsiaka sy lalina ny rano. 🙂
Sary: (CC) Brian Solis. www.briansolis.com. Avy amin'i Hugh MacLeod ny sary Gaping Void.
Tags: brian solishugh macleodmedia vaovaohaino aman-jery sosialy
Maninona ianao no tsy afaka maka tahaka an'i Amazon.com fotsiny
Iza ny mpihaino anao marina?
Apr 4, 2010 amin'ny 6: 54 AM
Manaiky tanteraka aho. Mandre orinasa maro manontany tena aho hoe "Tokony ho eo amin'ny Facebook ve isika hahita mpanjifa vaovao?". Tsia ny valiny ho an'ny ankamaroany, satria tsy hahomby ny tanjonao voalohany: ny ho tonga amin'ny toerana tadiavin'ny prospect anao. Mandeha amin'ny Facebook ny olona hifandray amin'ny namana sy fianakaviana, hizara fihomehezana ary haneho ny heviny. Tsy mandeha mitady orinasa vaovao hiaraha-miasa aminy izy ireo. Afaka mampiasa ny fitaovan'ny haino aman-jery sosialy ny orinasa raha tsy mampiasa fitaovana toy ny Facebook, izay tsy natao mihitsy hanampiana azy ireo hahita fomba vaovao. Ekena fa mila hatsaraina ireo fitaovana media sosialy ho an'ny orinasa, saingy tsy midika izany fa mampiasa omby kely ianao raha andriamby no ilainao.
Apr 5, 2010 amin'ny 11: 29 AM
Mamaky tsara, misaotra nizara!
Tiako ny lisitrareo. Heveriko fa afaka manampy ny hafa hametraka ny tanjon'ny orinasany izany ary hanaraka azy ireo amin'ny fomba mahomby. Tiako ny lahatsoratra mampiseho ohatra tsotra sy torohevitra azo ampiharina.